Xirmooyinka Shiinaha ee ahama birta waa alaab lama huraan ah oo loogu talagalay marin nabadgelyo leh ee soo saarista iyo warshadaha maraakiibta | Daren
Markab saaran markab shixnado ah, dhammaantoodna ku jira noocyo kala duwan oo qalab ah, oo aad ugu habboon hagitaan ammaan ah. Qalabka badan ee markabka, oo ay ku jiraan birta biraha ah ee birta ah ee birta ah, inkasta oo ay jiraan qalab yar oo yar, ayaa ah badqabka markabka qaybo muhiim u ah safarka. Maxay tahay sababta loo yiraahdo muhiimadda qeybahan muuqda ee yaryar u rarida? Aynu wada hadalno:
Sida laga wada warqabo, degaannada xeebta bari ee Shiinaha, dekedo badan, oo leh horumarinta ganacsiga caalamiga ah, heerka adeegsiga markabku aad ayuu u sarreeyaa, taas oo ka dhigaysa heerka isticmaalka biraha biraha ka samaysan ee biraha maraakiibta si aad ah u kordhay, waxay odhan kartaa maya markab ma jiro . Iyada oo la adeegsanayo xarkaha fiilooyinka birta ah ee birta ah, waxay u oggolaan kartaa markabka oo si ammaan ah u socda, maxaa yeelay qaybahan yaryar ayaa loo isticmaali karaa in lagu xiro, lagu xoojiyo, lagu hagaajiyo.
Safarka, culeyska markabka laftiisu aad ayuu u culus yahay, wuu ruxayay dartiis cimilada darteed. Haddii markan aysan jirin xarig bir ah oo ka sameysan biraha maraakiibta oo ku rari kara qaybaha asalka asalka ah, waxay horseedi kartaa in qaybaha markabku noqdaan kuwo dabacsan xitaa la afuufo, tani waxay siin doontaa markabka oo khatar ku jira, laakiin haddii uu jiro xarig bir ah oo ka sameysan biraha marinnada, sameyso qalab ku habboon, dabaysha iyo roobka, sii daa habsami u socodka markabka.
Suuqa inta ugu badan ee xarigga marinka marinka leh birta birta ah ee 304 l ahama, 316 l bir birta ah iyo laba kale oo kaarboon yar oo birta austenitic ahama. Maxaad u isticmaashaa qalabka birta ka sameysan? Ama birta austenitic ahama ee kaarboon hooseysa?
Dhamaanteen waan ognahay in birta birta ah ay leedahay anti-gabowga, u adkaysiga daxalka, heerkulka hooseeya ee u adkaysta, ma sahlana in miridhku dhaco, iyo wixii la mid ah mudnaanta, iyo 304 l ahama iyo 316 l bir daxal leh waxay keeni karaan caabbinta daxalka ee bii'ada maraakiibta dhexdhexaadka ah. ion (dhexdhexaad), sidoo kale si fudud loo farsameeyo wax taaj oo kale, ma jiri doono daxalka intercrystalline ka dib markii alxamadu keento dhibaato qarsoon. Marka waxaan dooranay 304 l bir birta ah iyo 316 l bir birta xarkaha leh ee marinka badda waa mid aad u habboon
Faa'iidooyin badan ayaa lagu dejiyaa birta aan-lahayn ee leh, iyada oo lagu darayo xarig ku habboon, xoog ku xirxiraya, sidaas darteed ma aha oo kaliya baaxadda isticmaalka markabka, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa shidaalka, saliidda, dhismaha, gaadiidka, dhuumaha, kuleylka ilaalinta, siligga iyo fiilada, buundada xargaha, qalabka isgaarsiinta, calaamadaha, beeraha, gaadiidka, soo saarida mashiinada, korantada, qalabka korontada, soosaarka warshadaha, qalabka caafimaadka, warshada korontada, dhirta caanaha, warshadaha kiimikada, diyaaradaha, tareenka, xawaaraha sare ee tareenka , tareenka dhulka hoostiisa mara, warshadaha baabuurta iyo beero kale.